April 3, 2021 - Padaethar
မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း မင်္ဂလာဦးညတွင်မင်္ဂလာဦးမောင်နှံအတွက် ညစာစားဖို့လင်ဗန်းအကြီးတစ်ခု၌ အလွန်ကောင်းပြီးအနံ့အရသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသုံးဖို့အခန်းတစ်ခုမှာအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပေးတယ် သတို့သားက သတို့သမီးကိုစားသောက်ဖို့ခေါ်တော့ သတို့သမီးကမေးတယ်….ရှင့်အမေကော မစားဘူးလား.…?ခေါ်လိုက်ပါ အတူတူ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စားလိုက်ကြရအောင် …. သတို့သားက အမေ အိပ်သွားပြီးထားလိုက်ပါ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ စားလိုက်ကြရအောင်…ဇနီးက ထပ်ပြောတယ်။ ကျွန်မသိတယ်ရှင့်အမေလည်း ထမင်း မစားရသေးဘူးခေါ်လိုက်ပါ အတူစားရအောင်ပြောတော့..အိပ်ပါစေ ထားလိုက်ပါကွာဟုပြောတယ်။ ထိုအခါ သတို့သမီးက ထပ်ဖန်တလဲလဲအမေကိုခေါ်ဖို့ ပြောပေမယ့်သတို့သားကလည်း ထပ်ဖန်တလဲလဲ ငြင်းဆိုရာကနေနောက်ဆုံး သတို့သမီးက သူမကိုကွာရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သားအချင်းများရာကနေကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုက်ကြတဲ့အခြေသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့တယ်။လမ်းခွဲကြပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးဟာကိုယ်စီ နောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်လိုက်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးက သူမရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေတယ်…။နှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ သူမက နေရပ်ကိုပြန်လာတော့သားသမီးတွေကလာရောက်ကြိုဆိုကြပြီး အိမ်ပြန်လာကြတယ်။ လမ်းခုလတ်တနေရာမှာလူတစ်ယောက်ဟာဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ဆင်လျက် အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာတောင်းရမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ အမျိုးသမီးက သားတွေကိုပြောတယ်။ အဲ့လူကို … Read more
သားညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေကို ယောက္ခထီးကြီးက အကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ…
သားညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေကို ယောက္ခထီးကြီးက အကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ ကျား အားတိုး​ဆေးထဲမာခွေးလျားနက်စေ့အကြောင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်…. ” မကြင်​မြ..” ” ​​ဘာတုန်းကို​ဆောင်း ” ” ငါ့ ​ခွေး​လှေးယားသီး အနက်​​စေ့​တွေ ဘယ်​မတုန်း…. ” ဟင်​…..ကျုပ်​လည်း ဘယ်​သိမတုန်း ၊ ​တော်​ကဘယ်​မှာထားလို့လဲ ” ” ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ် တင်​ထားတာ​လေ ” မောင်​​ဆောင်း အ​တော်​​ဒေါသထွက်​မိတယ်​…. ဘယ့်​နှယ်​ဗျာ…​ခွေး​လှေးယားသီးအနက်​​စေ့က ကျားခွန်​အားတိုးတယ်​ဆိုလို့ ဝယ်​စားပါတယ်​ ။ ဘယ်​သူမှ မစား​လောက်​ပါဘူး​လေဆိုပြီး ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ်တင်​ထားကာမှ ​ပျောက်​ချင်းမလှ​ပျောက် သွား​တော့ ​ဒေါသမထွက်​ပဲရှိမလား ။ ” င​ဆောင်း.. ” ” ဗျာ..အ​ဖေ ” ” ခဏလာဦး ​မောင်​​ဆောင်းရဲ့ ​ယောက္ခထီးကလှမ်း​ခေါ်​တော့ ​မောင်​​ဆောင်းလည်း ​ဒေါသကိုချုပ်​တည်းပြီး ​ယောက္ခထီးဆီသွားရတာ​ပေါ့ ။ ” ​ခွေး​လှေးယားသီးအ​စေ့ကို … Read more
ယောင်ျကြားတှတေျောတျောမြားမြားက အမြားပြျောအောငျ Facebook မှာဖွဈဖွဈ အပွငျမှာ သူငယျခငျြးဆုံရငျဖွဈဖွဈ လုလုအောငျဟေ့ !!! မအေးသောငျးဟေ့ !!!စသဖွငျ့ ရီစရာတှရေေးတငျ ဟာသတှလေုပျပွီး Troll နကွေတာ… တကယျ့အပွငျလောကမှာတော့ လုလုအောငျ မအေးသောငျး ဆိုရငျ ဘယျကောငျမှ ဘာမှကို မခံစားရတာဗြ။ (တကယျပွောတာ ဘာမှကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဂုဏျတငျပွောနတော မဟုတျပါဘူး။ယောကျကြားအမြားစု ( အမြားစု )ရဲ့ ခံယူခကျြ စိတျနသေဘောထားကို ပွောပွတာ။ကြားသဘာဝ တို့ Men’s Behaviour တို့ ယောကျကြားစရိုကျ တို့ကွောငျ့ဘဲဗြ။ဝတျမှုံရှရေညျ ဘယျလိုလှလှ ၊ ခငျသနျးနုဘယျလို လှခဲ့လှခဲ့ ၊ မို့မို့မွငျ့အောငျ ဘာဖွဈဖွဈ သူတို့နဲ့ နီးနီးစပျစပျ တခြို့တလကေလှဲပွီး ဘယျပွငျပယောကျကြားမှ သူတို့ကို အရူးအမူး ဖွဈမနဘေူးဗြ။ဟော !!! … Read more
ယောင်္ကျားဆိုတာ ခန္မာကိုယ်က ယောင်္ကျား ဖြစ်နေတိုင်း ယောင်္ကျားလို့ပြောလို့မရဘူး
ယောင်္ကျားဆိုတာ ခန္မာကိုယ်က ယောင်္ကျား ဖြစ်နေတိုင်း ယောင်္ကျားလို့ပြောလို့မရဘူး ဝုန်း……..ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးကို ဆောင့်ကန် ဖွင့်လိုက်သော အသံကြောင့် ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့် ချစ်သူပါ လန့်သွားပြီး။ အခန်း တံခါးပေါက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မီးဝင်းဝင်း တောက်နေသော မျက်လုံးများနှင့် ကြည့်နေသော ကျွန်တော့် အဖေ။ ကျွန်တော့်ချစ်သူက မျက်နှာ လွှဲနေလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဧည့်ခန်းထဲကိုလာခဲ့ …..အဖေ ကပြောပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားပါတော့သည်။ ချစ်သူကို အခွင့်အရေးယူရန် ကျိုးစားနေသော ကျွန်တော်။ အဖေ ကိုယ်တိုင် မိသွားသဖြင့် ရှက်စိတ် မွန်ပြီး ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတော့ ကျွန်တော့် ချစ်သူလက်ကို လှမ်းအဆွဲ နေဦးလေ ကိုမောင်ရဲ့ ကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်ပါရစေဦး။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းကိုရောက်တော့။အဖေက ကျွန်တော့်ချစ်သူအား။ သမီးကို … Read more
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများအကြောင်း သိပြီးပြီလား…
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများအကြောင်း သိပြီးပြီလား… မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုထား ရတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြန်မာ့အိနြေ္ဒ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟန်ပန်တွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့နဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအချို့တော့ရှိပါတယ်) ဟိုး….အရင်တုန်းက ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ မြန်မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်ပြသွားပီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကျက်သရေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ကိုထိန်းသိမ်းပြသွားတာတွေ …. ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့….Facebook မှာ like တစ်ခု ရဖို့အရေး…..ရှိသမျှပစ္စည်းတွေ အကုန်ဖော်ပြနေကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး တွေများလာတယ်……သူတို့ပိုစ့်တွေရဲ့ comment တွေကြည့်လိုက်ရင် အယုတ္တအနတ္တစုံလင်နေအောင်ဆဲဆိုနေကြတဲ့အဆဲ comment တွေကို အဟုတ်မှတ်ပီးသာယာနေတယ်… ခေတ်ဆန်ပီးရှိသမျှဖော်ပြနေမှ ဝိုင်းပြစ်မှားခံနေရတဲ့Facebook နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်နေတာလား ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေက အပြင်သွားလာတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်မှာရော လုံခြုံမှူ့ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါသလား ကွယ်ရာကလေ ပစ်မှားဖို့ပြစ်မှားဖို့ချောင်းနေတဲ့ ပုရိဿယောကျာ်သားတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေတယ်….. … Read more
ရုပ်အဆင်း လှပစေသော ကုသိုလ် (၄) မျိုး
ရုပ်အဆင်း လှပစေသော ကုသိုလ် (၄) မျိုး “ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ ဖြစ်လေရာ ဘဝတို့တွင် သူတစ်ပါးထက် ရုပ်အဆင်း လှပ လိုသူတို့ သည် ကောင်းမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပြုကြ ရမည် ဟု ကျမ်းဂန်တို့ ၌ဆို ကြ၏ ။ ထိုကောင်းမှု ( ၄ ) ခုသည်ကား ၁။ အဝတ်အစား , သင်္ကန်း လှူဒါန်းခြင်း ၂။ အစာအဟာရ လှူဒါန်းခြင်း ၃။ ဒေါသကို ချုပ်တည်း၍ မေတ္တာပွားခြင်း ၄။ တံမြက်လှည်းခြင်း ဤ( ၄)ပါးသည် ရုပ်အဆင်း လှပခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်လေ ၏ ။ … Read more
ဖင်ပြား တာကောင်းလား …ဖင်ကြီး တာ ကောင်းလား
တကယ်​​တော့ ဖင်​ပြားတာဟာ ည​လေးတို့တွက်​မ​ကောင်းပါဘူး ဘာ​ကြောင့်​လည်းဆို​တော့ ကွီး​ပြောပြမယ်​ ဖင်​ပြားရင်​ Like ကမရ Like မရ​တော့ စိတ်​ကမကြည်​ စိတ်​မကြည်​​တော့ ​ရန်​​တွေဖြစ်​ မနိုင်​​တော့ ဖင်​တု​ပြေးဝယ်​ ဖင်​တုနဲ့ ဓာတ်​ပုံရိုက်​ မရိုက်​တတ်​​တော့ အတုမှန်းသိသာ လူတကာ ကဲ့ရဲ့ခံရ စိတ်​ဓာတ်​​တွေကျပြီး ​ဖေ့ဘုတ်​မသုံး​တော့ ​ဖေ့ဘုတ်​မသုံး​တော့ လင်​ကမရ အပျိုကြီးဖြစ်​ .. ပိုပြီး​​ဒေါသထွက်​လာ ​ဒေါသ​ကြောင့်​ ​ရောဂါရ ​ဆေးရုံတက်​ .. ​ရောဂါကု ပိုက်​ဆံကုန်​ .. ​သူ​တောင်းစားဖြစ်​ အစာနပ်​မမှန်​​တော့ လူကပိန်​ချုံး ဝဲ​တွေစွဲ .. အသက်​ကလည်းကြီးလာ ​နောက်​ဆုံး ဘိုးဘွားရိပ်​သာ​ရောက်​ .. ​ဂေါက်​ ! ကဲ .. မ​ပြောဘူးလား ဖင်​ပြားတာ ည​လေးတို့အတွက်​ အန္တရာယ်​ရှိတယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ ဖင်​ကြီးတာကြ​တော့ ဘာ​ကောင်းလည်းဆို​ … Read more
ရင်သား သေးလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ (ယောင်္ကျားလေးများ မဖတ်ရန်)
မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်သား အလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောင်္ကျားတွေ အတွက်လား။ အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ( ၁ )ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ( ၂ ) ကားစီးတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ( ၃ )ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ( ၄ )ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ( ၅ ) Gym သွားကစားတော့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားကစားနိုင်တယ်။ ( ၆ )စားရင်းသောက်ရင်း အမှတ်မထင် ပါးစပ်ကနေကျသွားရင်လည်း အင်္ကျီပေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ … Read more